Types of Goods » EconomicsEconomics
welfare	စာရေးသူများ ingyinzuzue You are here: Home > economics > Types of Goods
Tags: general4Responses to “Types of Goods”
ngwehlaing says:	August 23, 2009 at 8:54 pm	Hi there,
I just read Poverty.Can you explain more about of luxury and neutral goods? I am not clearly understand what do they mean? I will look forward your reply.Thank you.
Reply	zuzue(yie) says:	August 27, 2009 at 7:49 pm	ူluxury goods, ဆိုတာမျိုးက ဇိမ်ခံပစ္စည်း အမျိုးအစားမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ လူတွေမှာ ဝင်ငွေအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာပြီဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့၊ တန်ဖိုးပိုမိုမြင့်မားတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ပိုမိုသုံးစွဲလာချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝင်ငွေမြင့်မားလာတာတဲ့ နှုန်းထက် luxury goods တွေရဲ့ ဝယ်လိုအားနှုန်းက ပိုမို တိုးတက်လာပါတယ်။ အဲဒီလိုကုန်စည်မျိုးကို luxury goods အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
Reply	zuzue(yie) says:	August 27, 2009 at 7:54 pm	neutral goods
ဘယ်လိုဝင်ငွေ အဆင့်အတန်းမျိုးမှာ မဆို သုံးစွဲနိုင်တဲ့၊ သုံးစွဲချင်တဲ့ ကုန်စည်မျိုးပါ။ ဝင်ငွေ တက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျသည်ဖြစ်စေ ဒီကုန်စည်ကို သုံးစွဲနေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဝင်ငွေပြောင်းလဲမှု့က ကုန်စည်ရဲ့ ဝယ်လိုအားကို အကျိုးသက်ရောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုကုန်စည်မျိုးကို neutral goods လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
Reply	xxx2ube says:	January 24, 2012 at 1:03 am	Review…
It’s reallyacool and useful piece of info. I am satisfied that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing….